ျပည္သူေတြ အတြက္ ဝမ္းသာစရာ သတင္းေကာင္း ကို သယ္ေဆာင္ လာတဲ့ ေနထူးနိုင္ … – Let Pan Daily
Let Pan | May 13, 2020 | Celebrity | No Comments
ပရီးမီးယားလိဂ္ ေဘာလုံးပြဲေတြ ဇြန္တစ္ရက္ေန႕ ျပန္ ခြင့္ျပဳၿပီ ဘဏ္ေတြ လည္း ပုံမွန္ျပန္ဖြင့္ခြင့္ ရၿပီ
Bus ကားေတြ လဲ လိုင္းေတြ ဖြင့္ၿပီ…..က်န္တာ ဘာေတြ ထပ္ဖြင့္ေသးလည္း-?
ဆိုၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ လိုက္မႈ အေပၚ ကြီးေနထူးနိုင္ ရဲ႕ ပရိသတ္မ်ား ကေတာ့ ေကာ့မန႔္ ကေနၿပီး အပီအျပင္ကို အားေပးၾကပါတယ္။ အားလုံးပဲ အိမ္မွာေနေနတုန္း ကာလေလး မွာ သတင္းမွန္မ်ား နဲ႕အတူ ဖတ္ရႈၿပီး ဘဝအေမ ေျပေစရန္ တင္ျပေပး အပ္ပါသည္။
ေက်ာင္းေတြက ဖြင့္မွာပါ အစီစဥ္ ဆြဲေနၾကတုန္း လို႔ၾကား ရပါတယ္။ ဆရာမ/ဆရာ တစ္ေယာက္ကိုယ္ ခေလး 10 ေယာက္ႏူန္းထား နဲ႕သင္ရမည္လို႔လည္း သတင္းၾကား ရပါသည္။ အတိက်ေတာ့6လပိုင္းမွသိရပါမည္။ အကို သိသေလာက္ေလးေျပာျပဒါပါ
ကြၽန္ေတာ့္ ေကာင္မေလးလည္း မက္ဆင္ဂ်ာမွာ ဘေလာ့ ထားတာေလး ျပန္ဖြင့္ေပး ထားပါၿပီ။ စကားေတာ့ျပန္မေျပာေသးဘူး ငဗစ္ေၾကာင့္ ထင္တာပဲ
စက္႐ုံေတြျပန္ဖြင့္ၿပီ. ကားေတြ ဆြဲေနၿပီ. အလုပ္သမားေတြျပန္ လုပ္ေနၾကၿပီ.႐ုပ္ရွင္. သဘင္. ဂီတ. အႏုပညာလမ္းေတာ့ ခုထိ မဖြင့္ေသးဘူးဗ်ာ. ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ၾကည့္မယ္ထား လူေပါင္း ၂ ရာ တခါ ၾကည့္ရင္. ဒါေတာင္ေၾကာက္ၿပီးမ လာရင္ ၁၅၀ ေပါ့. စက္႐ုံေတြျပန္ဖြင့္ေတာ့ လူေပါင္း မနည္းဘူး အလုပ္ထဲမွာ.
မကူးနိုင္ဘူးလား. ေရာဂါက. က်ေနာ္တို႔ၾက႐ြာ တစ္႐ြာဗလား ဆိုင္းဝင္တီးလည္း ဒီေန႕ညေဖ်ာ္ေျဖ. မနက္ဧည့္ခံၿပီးျပန္. လာၾကည့္လည္း ၁၀၀ ေလာက္ခဏပဲ.. စက္႐ုံဆင္းသူေတြက လစာမရရင္. အေဆာင္ခ. စားဖို႔. သိတက္ၾကၿပီး အလုပ္ေတြျပန္လုပ္ ရတယ္။ အႏုပညာသမားေတြ အတြက္ၾက. ေမ်ာ္လင့္ခ်တ္ေပ်ာက္ေနၿပီ.
နိုင္ငံေတာ္ ကေထာက္ပံတဲ့ ဆန္လည္း ခုထိမရေသး. သဘင္ကေထာက္ပံတဲ့ ဆန္လည္း ခုထိမရနဲ႕. က်ေနာ္ ကေတာ့မေမွ်ာ္ လင့္ေတာ့ဘူး။။ အရင္လို ပြဲျပန္ကအေဖဥဩ အတူျပန္ကခ်င္ေနၿပီအကိုရာ…
အားလုံး အရင္လိုျပန္ျဖစ္ရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့ အကိုရယ္ျပည္သူလူထုလဲ အခက္ခဲအၾကပ္တဲေတြနဲ.ရင္ဆိုင္ေနၾကတယ္ တခ်ိဳ.မိသားစုေတြ အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္ဗ်ာျမန္မာျပည္သူျပည္သား အားလုံးအဆင္ေျပၾကပါေစလို.ဆုေတာင္းပါတယ္ ဘဝအေမာမ်ားေျပေပ်ာက္ ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ စီစဥ္တင္ဆက္ေပးမႈကို စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီကေနပဲ ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အားလုံးပဲ က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားျပည့္ဝၾကပါေစခင္ဗ်ာ။ ေကာမန႔္ကေနၿပီးလည္း တစ္ခုခု ေျပာေပးခဲ့ၾကပါ အုံးခင္ဗ်ာ….
ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးပွဲတွေ ဇွန်တစ်ရက်နေ့ ပြန် ခွင့်ပြုပြီ ဘဏ်တွေ လည်း ပုံမှန်ပြန်ဖွင့်ခွင့် ရပြီ
Bus ကားတွေ လဲ လိုင်းတွေ ဖွင့်ပြီ…..ကျန်တာ ဘာတွေ ထပ်ဖွင့်သေးလည်း-?
ဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ် လိုက်မှု အပေါ် ကွီးနေထူးနိုင် ရဲ့ ပရိသတ်များ ကတော့ ကော့မန့် ကနေပြီး အပီအပြင်ကို အားပေးကြပါတယ်။ အားလုံးပဲ အိမ်မှာနေနေတုန်း ကာလလေး မှာ သတင်းမှန်များ နဲ့အတူ ဖတ်ရှုပြီး ဘဝအမေ ပြေစေရန် တင်ပြပေး အပ်ပါသည်။
ကျောင်းတွေက ဖွင့်မှာပါ အစီစဉ် ဆွဲနေကြတုန်း လို့ကြား ရပါတယ်။ ဆရာမ/ဆရာ တစ်ယောက်ကိုယ် ခလေး 10 ယောက်နူန်းထား နဲ့သင်ရမည်လို့လည်း သတင်းကြား ရပါသည်။ အတိကျတော့6လပိုင်းမှသိရပါမည်။ အကို သိသလောက်လေးပြောပြဒါပါ
ကျွန်တော့် ကောင်မလေးလည်း မက်ဆင်ဂျာမှာ ဘလော့ ထားတာလေး ပြန်ဖွင့်ပေး ထားပါပြီ။ စကားတော့ပြန်မပြောသေးဘူး ငဗစ်ကြောင့် ထင်တာပဲ
စက်ရုံတွေပြန်ဖွင့်ပြီ. ကားတွေ ဆွဲနေပြီ. အလုပ်သမားတွေပြန် လုပ်နေကြပြီ.ရုပ်ရှင်. သဘင်. ဂီတ. အနုပညာလမ်းတော့ ခုထိ မဖွင့်သေးဘူးဗျာ. ရုပ်ရှင်ရုံ ကြည့်မယ်ထား လူပေါင်း ၂ ရာ တခါ ကြည့်ရင်. ဒါတောင်ကြောက်ပြီးမ လာရင် ၁၅၀ ပေါ့. စက်ရုံတွေပြန်ဖွင့်တော့ လူပေါင်း မနည်းဘူး အလုပ်ထဲမှာ.
မကူးနိုင်ဘူးလား. ရောဂါက. ကျနော်တို့ကြရွာ တစ်ရွာဗလား ဆိုင်းဝင်တီးလည်း ဒီနေ့ညဖျော်ဖြေ. မနက်ဧည့်ခံပြီးပြန်. လာကြည့်လည်း ၁၀၀ လောက်ခဏပဲ.. စက်ရုံဆင်းသူတွေက လစာမရရင်. အဆောင်ခ. စားဖို့. သိတက်ကြပြီး အလုပ်တွေပြန်လုပ် ရတယ်။ အနုပညာသမားတွေ အတွက်ကြ. မျော်လင့်ချတ်ပျောက်နေပြီ.
နိုင်ငံတော် ကထောက်ပံတဲ့ ဆန်လည်း ခုထိမရသေး. သဘင်ကထောက်ပံတဲ့ ဆန်လည်း ခုထိမရနဲ့. ကျနော် ကတော့မမျှော် လင့်တော့ဘူး။။ အရင်လို ပွဲပြန်ကအဖေဥဩ အတူပြန်ကချင်နေပြီအကိုရာ…
အားလုံး အရင်လိုပြန်ဖြစ်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ အကိုရယ်ပြည်သူလူထုလဲ အခက်ခဲအကြပ်တဲတွေနဲ.ရင်ဆိုင်နေကြတယ် တချို.မိသားစုတွေ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျာမြန်မာပြည်သူပြည်သား အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို.ဆုတောင်းပါတယ် ဘဝအမောများပြေပျောက် ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင် ကျွန်တော် တို့ရဲ့ စီစဉ်တင်ဆက်ပေးမှုကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီကနေပဲ တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးပဲ ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေခင်ဗျာ။ ကောမန့်ကနေပြီးလည်း တစ်ခုခု ပြောပေးခဲ့ကြပါ အုံးခင်ဗျာ….
ရင်သပ် ရှုမောဖွယ်ပုံစံ နဲ့ အပီအပြင်ကနေ တဲ့ စုလှိုင်ဝင်း ရဲ့ဗီဒီယို
မြန်မာ၀တ်စုံလေးက လုံးကြီးပေါက်လှ အချိုးအစားလေးကို အထင်းသားပေါ်လွင်တဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
တင်းရင်း ပြည့်ကိတ်နေတဲ့ ခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှတွေေပေါ်နေတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေး လာတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
တင်းရင်းကိတ်လွန်း တဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှ ကို ပေါ်လွင်အောင် လန်းလွန်း နေတဲ့ မေပန်းချီ